Ideputa na ide edemede | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Akwụkwọ edemede na ederede
Nyocha nke akụkọ akụkọ Krylov "Wagoning": ọrụ dabara na ụwa nke ugbu a
Ugboro ole ka o juru anyị anya na akụkọ akụkọ egwu banyere akụkọ Ivan Andreevich Krylov! N'oge ụlọ akwụkwọ, ọtụtụ n'ime anyị nwere mmasị na ike ya ịdọrọ ntụnyere anumanu na ụmụ mmadụ, yana ọmụmaatụ nke akụkọ ifo ya ...
Nyocha gbasara uri Zhukovsky “The Untold”. Etu esi ekwu okwu gi?
Vasily Andreyevich Zhukovsky wetaara ntụziaka ọhụrụ na akwụkwọ Russia - ihunanya, nke bụ na mbido narị afọ nke iri na iteghete na-agbasasị na Europe naanị. Onye na-ede uri na-enwe ekele na ọ dị mfe na amara nke amaokwu nke ụdị a na…
Voloshin Maksimilian Aleksandrovich: akụkọ banyere ndu, ihe okike, ndụ mmadụ
Voloshin Maximilian (afọ ndụ - 1877 - 1932) - onye na-ede uri, onye na-ese ihe, nkatọ nka, ndị nkatọ n’edemede. Voloshin bu onye puru iche. Aha ezigbo ya bụ Kiriyenko-Voloshin. Nwatakiri, nwata akwukwo
Iri na Abụọ. Gbochie Nchikota nke uri
Emepụtara uri Block 'iri na abụọ' ozugbo echigharịrị nke 1918 nke afọ. Ọ gosipụtara ihe ndị mere eme (oyi na-atụ, nchikọba ọnụ ụzọ, Red Army patrols n'okporo ụzọ obodo, okwu, ihe…
A.S. Pushkin. “Oge mgbụsị akwụkwọ! Anya!
Onye ọ bụla ma na obodo anyị a ma ama "Autbịa" (na mbipụta ọzọ nke “Ọktoba abịalalarị…”). Ikekwe ọ bụghị obi, mana achọrọ ụzọ abụọ. Ma ọ bụ opekata mpe ahịrịokwu ụfọdụ, ọkachasị ndị ahụ…
Otu esi ede edemede banyere nkà ihe ọmụma?
Mmepe nke ikike iche echiche, dị ka ngosipụta doro anya na nghọta nke echiche, ịgbaso usoro ezi uche dị na nhazi na ịhazi ihe a na-eso arụmụka edere ede. Studentsmụ akwụkwọ na-amụta ụdị ọrụ a na ụdị ederede edere ka…
“Farewell, Russia aswasighi…” Lermontov, “Farewell, Russia aswasighi”: akụkọ okike, nyocha nke uri
Uri "Farewell, Russia na-enweghị mmachi ..." Lermontov dere n'afọ ikpeazụ nke ndụ nkwụsị ya. N’oge okooko osisi na nka. Usoro ahịrị asatọ ndị a dị mfe ọfụma ka ọ kacha wee bụrụ ndị a kacha ama ama ...
Oster Gregory: maka ụmụaka nwere ịhụnanya
Oster Grigory Bentsionovich bụ onye ama ama na Russia na mba ndị gbara ya gburugburu. Enwere ike ịchọta akwụkwọ ndị o dere na ụlọ ọ bụla ebe nwata ahụ bi. Ha nọ na shelves nke ihe niile ma ọ bụ obere ...
M. Sholokhov, “Ọdịdị mmadụ”: nyocha. "Ọdịdị mmadụ": isi ihe odide, isiokwu, nchịkọta
Na Disemba 1956 na Jenụwarị 1957, akwụkwọ akụkọ Pravda bipụtara ọrụ onye edemede Soviet Mikhail Alexandrovich Sholokhov, "The Fate of Man", banyere nnukwu ọnwụnwa na nnukwu mgbaghara nke ndị Soviet ruo n'ili ...
Nkọ akụkọ banyere Ryleyev dị mkpirikpi, onye na-ede uri, onye ọha na eze, Decembrist
Ryleyev Kondraty Fedorovich, akụkọ banyere mkpirikpi akụkọ ihe mere eme nke a ga-atụle n'okpuru, hapụrụ akara dị ịtụnanya na akụkọ na akwụkwọ Russia. Ya na A.S. Pushkin na A.S. Griboedov mara ezigbo mmekọrịta, mana mmekọrịta ha dabere na…
V.P. Astafiev, "Vasyutkino Lake": ibe nke ọrụ ahụ
V.P. Astafyev bụ otu n'ime ndị nnọchite anya akwụkwọ ndị Russia na-adọrọ mmasị. Ọ bụghị n'efu ka ha kpọrọ ya etu etu akọ na uche dị na omume anyị si dị. Nwoke na odidi, nwoke na agha, ndu obodo, ihe omimi ...
Arthur Conan Doyle, Lowa Etufurula. Nchikota
Maka imirikiti ndị na - agụ akwụkwọ, Arthur Conan Doyle bụ onye dere akụkọ gbasara onye na - achọpụta ihe gbasara ya na nna onye edemede Sherlock Holmes. Mana na akaụntụ ya, e nwere ọrụ ndị ọzọ, agbanyeghị na ọ bụghị dịka…
Ntị, sincwain: atụ nke iji na mmụta nke asụsụ Russia na akwụkwọ
Uzo ohuru eji nkuzi nkuzi choro ka ihe nkuzi were juputa ya dika o kwere mee, ya mere nwa akwukwo gha eweputa otutu ihe omuma banyere ihe omuma banyere ya na mmuta ya.
Nchikota nke Snow Queen site n'aka Hans Christian Andersen
Kemgbe ọtụtụ ọgbọ, ndị na - agụ akwụkwọ a, akụkọ a abụla ma bụrụ otu n'ime ndị kacha hụ n'anya. Nchịkọta nke "Snow Queen" nke onye edemede Danish Hans Christian Andersen nwere ike imeghari nwatakiri ọ bụla na okenye, ekele maka ọtụtụ ndị…
"Wolf nọ n'ụlọ nkịta." Akụkọ nke I. A. Krylov
Gendị akwụkwọ ọgụgụ dị ka akụkọ ifo sitere n'aka 4000 afọ gara aga. Akụkọ ilu a na-akọ amị eziokwu nwere ebumnuche bụ isi - ụkpụrụ omume. A wetara ụdị mkpụrụ akwụkwọ a na akwụkwọ Russia ma bụrụ nke Ivan Andreevich Krylov tụgharịrị. Ọ bụrụ ...
“Lone Sail Whitens”: nchịkọta na nyocha gbasara abụ ọkacha mmasị
Obi abụọ adịghị ya, M. Yu Lermontov bụ otu n'ime klas kacha mma na uri na akwụkwọ Russia n'ozuzu. Ike ya nke okwu a, uri nke edoghi na obi ilu n’edemede obula jikotara ya na mmasi…
A. S. Pushkin, “Nkwupụta”: nyocha nke uri
Alexander Sergeevich Pushkin “gghọta” dere mgbe ọ dị afọ 27. A raara uri a n’otu n’ime otutu ndi egwu ya - Alexandra Osipova. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na -eme ihe okike, Pushkin nwere oke ọchị ...
Nyocha miri emi nke uri. Balmont "Verbosity"
Konstantin Balmont nọ n'otu oge bụ ama ama ama. Obere abụ ya na-atọ ụtọ maka ọgbọ nke na-eto eto, na-enwekarị nyocha na iche echiche. Ọrụ Balmont jupụtara na ihunanya na ịchụ nwoke mmụọ, ha nwere obi ọmịiko na ntorobịa…
Andrey Usachev - onye edemede ụmụaka, onye na-ede uri na onye edemede prose
Andrei Usachev bụ onye edemede ụmụaka, onye na-ede uri na onye edemede prose. Ọ pụtara na okirikiri ederede n'oge ihe siri ike, mgbe edepụtara amaokwu niile dị mma na edere abụ niile. Onye edemede ọzọ na…
M. Yu Lermontov. Eziokwu na-atọ ụtọ site na ndụ onye edemede
Ugbua ọ bụghị maka otu ọgbọ nke ndị hụrụ akwụkwọ Russia n'anya, ndụ M. Lermontov nwere mmasị. Oge ụfọdụ nke oge ya ka bụ ihe omimi. Na ọtụtụ ihe omume, ọ bụrụ kpuchie ya,…